” နံနက်စာ ဟူသော Breakfast “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” နံနက်စာ ဟူသော Breakfast “
” နံနက်စာ ဟူသော Breakfast “
Posted by ခင်ခ on Aug 11, 2014 in Creative Writing, Health & Fitness, My Dear Diary | 20 comments
မိုးလင်းလို့ နံနက်ခင်းရောက်ရင် လူအတော်များများ နံနက်စာကို စားကြလေ့ရှိကြတယ်၊
ကျုပ်နေဖူးတဲ့ ရောက်ဖူးတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ မြို့တွေမှာတော့ နံနက်မိုးလင်းခြင်းကို ” ပဲပြုတ် ” လို့အော်သံတွေ ” ကောင်ညှင်းပေါင်း ငချိပ်ပေါင်း အကြော် ” လို့ ဆိုသံ ” ဆီထမင်း၊ ကောင်ညှင်းပေါင်း ပဲပြူတ် ဆိုသော ဈေးရောင်းသံတွေ ကြားနေကြရပြီး ” လာပါအုံး ” ဟုဆိုကာ ၀ယ်စား တတ်ကြသလို တစ်ချို့ကလည်း မုန့်ဟင်းခါ အသုတ် အကြော် ဘိန်းမုန့် အီကြာကွေနဲ့လက်ဘက်ရည် သျှမ်းခေါက်ဆွဲ မြီးရှည် ပေါက်စီ နန်းကြီးသုတ် ထမင်းကြော် ထမင်းဆီစမ်းနဲ့ကြက်ဥကြော် အစရှိသဖြင့် ပါဆယ်ဝယ်သူဝယ် ဆိုင်မှာစားသူစား ပြုလုပ်တတ်ကြ သလို နံနက်ပိုင်း လဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလည်းကောင်း နံနက်စာရောင်း သောဆိုင်တွေ အိုဒီယမ်တယ်လို ဒင်ဆမ်း ဆိုင်တွေမှလည်းကောင်း အပြည့်အလျှံအားပေး စားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေလည်း ဟိုတယ် က တည်ခင်းတဲ့ နံနက်စာကို စားကြတယ်လေ။ အဲဒီမှာ အနောက်တိုင်း နံနက်စာတည်ခင်းရင်တော့ သူတို့ဓလေ့ အချိုရည်တစ်ခွက်အရင် သောက်ပြီးမှ အစာဆက်စားကြတယ်ပေါ့၊ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းနီးပါး တစ်မိုးသောက်လို့ အိမ်ယာမှ နံနက်နိုးထတဲ့အခါ နံနက်စာ တစ်ခုခု စားကြ လေ့ရှိကြတယ်ပေါ့။
ထိုနံနက်စာကို ကမ္ဘာတစ်ခွင်ရှိ တောနယ်မှာလည်း တောဓလေ့ မြို့မှာလည်း မြို့ဓလေ့ နဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ လည်း မိမိတိုင်းနိုင်ငံအလျှောက် ဓလေအစားအစာများ ပြုလုပ်စားကြပါတယ်၊ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာတောင် ရန်ကုန်ဆို နံနက်ခင်း မုန့်ဟင်းခါး ဆိုင်တွေမှာ လူအုံလောက်အောင်စားကြသလို မန်းမှာတော့ မြီးရှည်ဆိုင်တွေ မှာ လက်မလည်အောင် ရောင်းရ စားကြလေရဲ့ပေါ့၊ တောင်ကြီး လားရှိုး ဘက်တွေမှာတော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ တို့ဗူးနွေးတို့က သူတို့ဒေသအတွက် နံနက်စာဆိုင် လူစည်းကားပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလို နံနက်စာကို အနောက်တိုင်းစကားလုံးကတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးကို ညွှန်ပြဟန်ပါနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အခေါ်က Breakfast ဟုသုံးနှုန်းထားလို့လေ။ အဲဒီစာကားလုံးတွဲကို အခုလိုလေးကြည့် လိုက်ပါ။
Break – အဆုံးသတ်စေသည်၊ အဆုံးသတ်သည်
Fast – ဥပုဒ်စောင့်သည်၊ အစာမစားဘဲနေသည်။
ထိုစကားရပ်နှစ်ခု၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အခုလိုဆီလျှော်အောင်ရေးလိုက်တော့ ” အစာမစားဘဲနေမှုကို အဆုံးသတ် စေသည် ” ဟူသော Breakfast နံနက်စာအဖြစ် ဖြစ်လေတော့သည်။
တကယ်လည်း ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှ နံနက်နိုးထသည့် မိုးသောက်ချိန်ထိ အစာမစားဘဲ အိပ်ပျော်နေကြပြီး နေ့တစ်နေ့၏ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အစာမစားမှုကို ရပ်တန့်စေကာ အစားအသောက်ကို စတင်စားခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါလားဗျ၊ မြန်မာမှာတော့ နံနက်အစောပိုင်းမှာ စားသဖြင့် နံနက်စာ ဟုခေါ်တယ်ပေါ့။
တိုင်းရင်ကျန်းမာရေးအရ ရှေးအဆိုမှာလည်း နေ့တစ်နေ့ စားသောက်မှုတွေကို အခုလိုအဆိုရှိခဲ့ပါတယ်။
နံနက်စာကို ဘုရင်လို စား
နေ့လည်စာကို ပြည်သူလို စား
ညစာကို ကျွန်လို စား ဟုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုရင်တစ်ပါး စားပွဲတော်တည်းခင်းလျှင် ဟင်းအရံများစွာနှင့် စုံလင်စွာတည်းခင်း စားသောက်သကဲ့သို့ နံနက်စာကိုလည်း ခန္ဓာကိုယ်အဟာရဖြစ်အောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ၀၀လင်လင် စားသင့်ကြောင်း ဖော်ညွှန်းပြီး၊ နေ့လည်စာကိုတော့ အသင့်သင့် ကောင်းမွန်စွာ အဟာရဖြစ်စားသောက်ဖို့နဲ့ ညစာကို အလွန်အကျုးစားခြင်း သည်ခန္ဓာကိုယ်အ၀လွန်မှု အဆီတိုးမှုကိုဖြစ်စေသဖြင့် ရှေးအခါက ကျွန်များသည် ဗိုက်ဝလျှင်ပြီးရော ဆင်းရဲ သား စားသောက်ရသည့် ခန္ဓာကိုယ်အစာအိမ် ဆာလောင်မှုကင်းရုံမျှ စားသောက်နေခြင်းသည် ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်သော စားသောက်နေထိုင်မှုအဖြစ် ဆိုရိုးထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းပင်တွေဟာ ရေ နေ မရရင် ညှိုးငယ်ကာနေကြရသလို ထို ရေ နေ မရသည့်အခြေအနေမှ ရေလောင်းပေး လိုက်သောအခါ နေရောင်ခြည် ရရှိလာသောအခါ ရှင်သန်ကြီးထွား သန်မာလာသလို တစ်ညလုံး ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းအင်္ဂါတွေမှာ အစာ ရေ အဟာရဓာတ် ပြတ်နေပြီး နံနက်စာ စားပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အဟာရဓာတ် စုတ်ယူရရှိကာ အသက်ရှည်ကျန်းမာစေခြင်း ဖြစ်စေပါသည်၊ တစ်ချို့က နံနက်စာကို အချိုရည်တစ်ခွက် ကော်ဖီ တစ်ခွက် လောက်နှင့်သာ ပြီးစီးစေခြင်း နံနက်စာ မစားခြင်းတို့ပြုပြီး နေ့လည်စာမှ ရင်ခေါင်းပြည်စားခြင်း ညစာ ကို ဘီယာဆိုင်တို့တွင် အစားအစား အရည်တို့ အတိုင်းအတာမရှိ စားသောက်တတ်ကြတာမျိုးကိုလည်း ရှိတတ် ကြပါတယ်၊ ထိုသို့ နေထိုင်စားသောက်မှုသည် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အရ ရေရှည်အတွက် ကောင်းမွန် စေသော အပြုအမူမဟုတ်ပါ။
သို့ပါသဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ညအိပ်ယာဝင်ချိန်မှ နံနက်နိုးထချိန်ထိ အစာရေစာနှင့် အဟာရဓာတ် ပြတ်လပ် နေသော သင့်ခန္ဒာကိုယ် ကို သနားကြင်နာစွာ ဂရုစိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ် Breakfast ဟူသော နံနက်စာ ကို ကောင်းမွန်စာ အဟာရပြည့် စားသောက် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာမှုကို ရယူကြစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ပါသည်။
မနက်စာ မစားဖြစ်တာ ၅ နှစ်.။
မနက်စာ မစားဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ
မနက်စာ စားဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ဖတ်ပြီး သကာလ ခု ပြန်စားနေတာ ၂ လလောက် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
ဟို အချက်လေးတွေ ပြန်ရှာလို့ ရရင် လာပေးထားပါမည်။
မနက်စာ မစားဖြစ်တာ ၅ နှစ် ဆိုပါလား။
ဒါပေမဲ့ အပြိုင်အဆိုင် များတဲ့ မျက်မှောက် ခေတ်ကြီးမှာ နောက်ကောက်ကျ မကျန်ခဲ့ဖို့ အတွက် အများစုက အလုပ် လောဘကြီး နေတတ် ကြပါတယ်။
ဒီစကား အပ်ကြောင်း ထပ်အောင် ကြားနေရပေမယ့် ဒါအမှန်တရားပါ။ တစ်ညတာလုံးမှာ ဘာမှမစားဘဲ အိပ်နေတာကြောင့် ဟာနေတဲ့ အစာအိမ် အတွက် အိပ်ရာနိုးချိန်မှာစားတဲ့ မနက်စာက အရေးကြီးပါတယ်။
Credit – Original up-loader
နှလုံး ကျန်းမာရေးသည် မနက်စာ စားသောက်သည့် အလေ့အထနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နံနက်စာကို ပုံမှန် အချိန်ယူ စားသောက်သင့်ကြောင်း သုတေသီများက အကြုံပြု ပြောကြားလိုက်သည်။ Circulation (သွေးလှည့်ပတ်မှု) ဆေးပညာ ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆောင်းပါးသည် လူပေါင်း (၂၇၀၀၀)၏ နေထိုင်မှု ဓလေ့စရိုက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဆက်နွယ်မှုတို့အပေါ် အခြေခံ သုတေသန ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သုတေသီများက နံနက်စာ မစားဘဲ နေခြင်းသည် နှလုံးတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ပိုမို ကြီးမားလာစေနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။
တစ်ဖက်တွင်လည်း နံနက်စာကို ကျန်းမာရေးနှင့် လျော်ညီသင့်တင့်သည့် ရွေးချယ်မှုမျိုးဖြင့် စားသောက်သင့်ကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟားဗက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆေးကျောင်းမှ ပညာရှင်များက မနက်စာ လွတ်သွားခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်များအတွက် ပိုမို အားစိုက် လှုပ်ရှားရလေ့ရှိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထိုအနေအထားကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် သွေးလှည့်ပတ်မှုတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော နှလုံးသည် ထိခိုက်မှု ပိုကြီးလာတတ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဗြိတိသျှ နှလုံးဖောင်ဒေးရှင်းကလည်း မနက်စာကို လျော်လျော်ကန်ကန် စားသုံးခြင်းသည် လူအများအနေဖြင့် သကြားဓာတ် လွန်ကဲသည့် Snackကဲ့သို့ သရေစာမုန့်များ စားသောက်ခြင်းကို အတားအဆီးတစ်ရပ် ဖြစ်သွားစေလေ့ရှိကြောင်း ထောက်ခံထားသည်။ အသက်(၄၅)နှစ်မှ (၈၂)နှစ်ကြား လူပေါင်း (၂၇၀၀၀)တို့၏ (၁၆)နှစ်ကြာ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများနှင့် နေထိုင်မှု ဓလေ့စရိုက်များကို သုတေသီများက ယှဉ်တွဲ လေ့လာခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် (၁၅၀၀)ခန့်သည် နှလုံးဖောက်ပြန်မှု၊ သေဆုံးသည်အထိ ဆိုးရွားသည့် နှလုံးရောဂါ ထိုးနှက်မှုများနှင့် ကြုံခဲ့ရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် ယင်းတို့အနက် အများစုသည် မနက်စာ ပုံမှန်စားသောက်သည့် အလေ့အကျင့်မျိုး ကင်းကွာနေသည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
နှလုံးထိခိုက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် အခြားညွှန်ကိန်းများမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပညာရှင်များက ထပ်မံ အတည်ပြုခဲ့သည်။ သုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ လားကာဟေးလ်က BBCနှင့် အင်တာဗျူးတွင် “ကျွန်မတို့ ပြောချင်တာကတော့ နံနက်ခင်း ကိုယ့်အိမ်မှာ အစားမှန်မှန် စားဖို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မနက်အိပ်ရာထပြီး (၁)နာရီ အတောအတွင်းလောက် ဆိုပါတော့။ တစ်ခုခု အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ဘာမှ အကျိုးမရှိတာထက် ကောင်းပါတယ်။ သေချာတာက ကျန်းမာရေးအရ မျှခြေရှိတဲ့ နေထိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းတဲ့ဘက်က ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမက နံနက်စာလွတ်ပြီး နေ့လယ်စာ စားချိန်ထိ အဆာခံနေရခြင်းသည် ရေရှည်တွင် ထိခိုက်မှု များလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ “မနက်စာကို လက်လွတ် မခံပါနဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်တွေအတွက် ပိုအားစိုက်ရရင် သွေးတိုးနိုင်တာမျိုး၊ အဝလွန်တာမျိုး၊ ဆီးချိုဖြစ်တာမျိုး ကြုံရနိုင်တယ်။ အဲဒီအချက်တွေ အားလုံးက နှလုံးကို ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စာကို လက်လွတ် မခံပါနဲ့”ဟုလည်း ဒေါက်တာကာဟေးလ်က အလေးအနက် ထပ်မံ တိုက်တွန်းသွားသည်။
Posted by Win Aung on December 26, 2012 at 22:30
တလောက တရုတ်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့CCTVက အသက်(၇၄)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်ကျန်းမာရေး ပညာရှင် ပါမောက္ခWan Cheng Kuiနဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခု တင်ဆက်သွားခဲ့တယ်။
လူအများသိပြီးကြတဲ့အတိုင်း မနက်စာကို ကောင်းကောင်းစား၊ နေ့လယ်စာကို ဝအောင်စား၊ ညစားကိုလျော့စားလို့ ဆိုကြပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုခေတ်လူတွေက မနက်စာကို ဖြစ်သလိုစား၊
နေ့လည်စာကို ကြုံရာစား၊ ညစားကို အဝအပြဲစားကြတယ်။ ဒါဟာ ရောဂါရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။
မနက်ပိုင်းအာဟာရတွဲဖက်စာအဖြစ် ပဲနို့ရည်၊ ကွေကာအုပ်နဲ့ ပန်းသီးတွေကို တွဲစားနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအစာမှာ ဟင်း သီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးပါရပါမယ်။ အခုခေတ်လူတွေက့ ၂ဝ% မနက်စာ မစားကြသလို ၅ဝ%-၆ဝ% က မနက်စာ မစား တတ်ကြဘူး။ မနက်စားအာဟာရအတွက် နေ့လယ်၊ ညနေစာတွေနဲ့ ပြန်အစားထိုးလို့
လောကမှာ မကောင်းတဲ့အကျင့်(၅)ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက ဆေးလိပ်သောက်တာပဲဖြစ်တယ်။ တစ်သက်လုံး ဆေး လိပ်သောက်သူဟာ နှစ်(၂ဝ)-(၂၅) စောသေကြတယ်။ ဆေးလိပ်တစ်ခါသောက်ရင် (၁၁)မိနစ် အသက်တိုတယ်။
ကျွန်တော်ဘာလို့ အရွယ်တင်နေသလဲ? ကျန်းမာနေသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တစ်သက်မှာ ဆေးလိပ်မသောက်ဖူးဘူး။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ဆေးလိပ်လာသောက်ရင် ဆောရီးပဲ တခြားနေရာမှာ သွားသောက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် သေကြောင်း ကြံ လို့ရတယ်။ တခြားလူကိုတော့ သင်မသတ်ပါနဲ့။ မနက်ထလာတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တာ ပိုအန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ လေပြွန်နာ၊ အဆုတ်လေနာ၊ အဆုတ်အတွင်းနာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာစ တဲ့ရောဂါတွေကို ရနိုင်ပါတယ်။
နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ အစားအစာတွေကက အရွက်စိမ်း (၈)အောင်စ သို့မဟုတ် (၁)ကီလို၊ အသီး (၂)လုံး၊ ဟင်းရွက်ဆီ (၃)ဇွန်း၊ (၂၅)ဂရမ်ထက်မပိုရ။ ထမင်း(၄)အောင်စ သို့မဟုတ် ပေါက်စီအသားလွတ်(၄)လုံးနဲ့ ပရိုတင်းအပြည့်အဝပါတဲ့
အစားအစာတွေဖြစ်တယ်။တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်ရတယ်။ ရေက လူတွေရဲ့အသက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်လူ တွေက ရေအသောက်နည်းကြတယ်။ ဆာမှ သောက်ကြတယ်။ တကယ်ဆို ဆာမှသောက်တာမဟုတ်ဘဲ အားတာနဲ့ သောက်နေရမယ်။
ရေအစား ရေနွေးကြမ်းရော ရသလားမေးရင် မရဘူး။ ကော်ဖီ၊ အချိုရည်၊ ဘီယာနဲ့အစားထိုးရင်ရော ရသလားမေးရင် မရဘူး။ ရေနွေးကြမ်းသောက်မယ်ဆိုရင်လည်း အခါးခြောက်နည်းရမယ်။ သေချာမှတ်ထားပါ….
လူတွေ စိတ်မတိုဘဲနေနိုင်လား? လူဆိုတာ ခံစားချက်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ။၊ ငိုမယ်၊ ရယ်မယ်၊ တိုမယ်၊ လွမ်းမယ်၊ ကြောက်မယ်၊ လန့်မယ်။ ပျော်ရင်ရယ်တယ်၊ မပျော်ရင် ငိုတယ်။ စိတ်တိုတဲ့အခါ နှစ်ခွန်းလောက်ဆဲလိုက်ရမှ …
ဒါဟာ လူတွေရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ခံစားချက်တစ်မျိုးပဲရှိရင် ဒီလူ မကျန်းမာတော့ဘူး။ ခံစားချက်ပြည့်ဝ တဲ့ လူတွေက ဘာလုပ်ချင်ရင် ဘာလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက အလွန်အကျွံမဖြစ်ရဘူး။အလွန် အ ကျွံဖြစ် ခဲ့ရင်လည်း အချိန်မကြာရဘူး။ ခံစားချက်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး ပြန်ထိန်းညှိရမယ်။
ဘုရင့်ကျမ်းစာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားပြီးသားပါ။ “စိတ်တိုရင် အသဲကိုထိတယ်၊ ပျော်ရင် နှလုံးကိုထိတယ်၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြရင် အဆုတ်ကိုထိတယ်၊ လွမ်းဆွေးရင် သရက်ရွက်ထိတယ်၊ ကြောက်ရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိတယ်၊
စိတ်ကြောင့်ရောဂါရတယ်”။ တကယ်တမ်းပြောရရင် လူအများက အိုသေ၊ နာသေတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကြောင့်သေကြတယ်။ အကြီးအကဲမလုပ်ရလို့ စိတ်ကြောင့်သေသွားတယ်၊ ဆရာမလုပ်ရလို့ စိတ်ကြောင့်သေ သွား တယ်၊
ပိုက်ဆံရှာမရလို့ စိတ်ကြောင့်သေသွားတယ်။ လူအိုတချို့ ကိစ္စသေးသေးမွှားမွှားနဲ့ စိတ်ညစ်၊ စိတ်တိုပြီးသေသွား တယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ကျွန်တော်ကြုံဖူးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ “စိတ်တိုဒေါသထွက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထွက်တတ်ရတယ်။ ခံစားချက်ရဲ့ဓားစာခံတော့ မလုပ်ရဘူး။ ခံစားချက်ရဲ့အရှင်သခင်ပဲလုပ်ရမယ်။ ခံစားချက်ကို မောင်းနှင်သူဖြစ်ရမယ်၊ ခံစားချက်ရဲ့ အမောင်းနှင်ခံရသူတော့ မဟုတ်နဲ့”
ဘယ်အရာမဆို အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ စားတာလည်း အတိုင်းအတာ၊ အိပ်တာလည်း အတိုင်းအတာ၊ အားကစားလုပ်တာလဲ အတိုင်းအတာရှိတယ်။ အားကစားမလုပ်ရင် မကောင်းသလို လွန်လွန်ကျွံကျွံလုပ်ရင်လည်း
ရောဂါခုခံနိုင်အားကို ကျဆင်းစေတယ်။ နေ့တိုင်း နာရီဝက်က တစ်နာရီထိ အားကစားလုပ်နိုင်တယ်။ လုပ်တဲ့နည်းကလည်း ရိုးရှင်းတဲ့နည်းကို အသုံးပြုလို့ရတယ်။ နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ရုံပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ လမ်းလျှောက်ရာမှာ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်။ လူငယ်တွေက မြန်မြန်လျှောက်ရတယ်။ တစ်မိနစ်ကို ခြေလှမ်း(၁၃ဝ)ထိ၊ နှလုံးခုန်နှုန်း တစ်မိနစ်ကို (၁၂ဝ)ကြိမ်ထိ ခပ်မြန်မြန်လေးလျှောက်ရတယ်။
ဒါမှ နှလုံးကို လေ့ကျင့်ပေးရာရောက်တယ်။ တစ်မိနစ်ကို ခြေလှမ်း(၁၃ဝ)၊ နှလုံးခုန်နှုန်း(၁၂ဝ) ရောက်ဖို့က ခဏလေးနဲ့ တော့ လုပ်လို့မရဘူး။ ခြေလှမ်းမှန်မှန် မြန်မြန်လှမ်းနိုင်မှရတယ်။ ဒါကို နှစ်ဝက်လောက် သင်လုပ်နိုင်ရင် သင့်နှလုံး၊
အဆုတ်ရဲ့အကျိုးကို ၃ဝ% က ၅ဝ%ထိ မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ လူငယ်အရွယ်ကစ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားရမယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အသက်(၃ဝ)ကတည်းက ဒီခန္ဓာအလေးချိန်ပဲ။ ဝလာပြီဆိုတာနဲ့ အလေးချိန်လျော့ဖို့က ခက်သွားပြီ။
အဓိက,က ပါးစပ်ကိုထိန်းမယ်၊ ခြေများများလှုပ်ရှားမယ်။ လူတွေက ပါးစပ်ကသာပြောတယ်။ ခြေကတော့ မလှုပ်ဘူး။
ကော်ဖီ တစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မုန့်ဟင်းခါး သို့မဟုတ် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ တစ်ပွဲလောက်စားဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကျွန်တော့်မှာ သွေးတိုးရောဂါ ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေ မစားသင့်မှန်းသိပေမယ့် ဆေးသောက်တာပဲ
ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခ ရေ…။
ကိုဘလက်ချောရေ သွေးတိုးရှိတဲ့သူက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားမယ်ဆို မစားခင် သံပရာသီးအရည်လေး စားမည့်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာလောက် သောက်ပြီးမှ စားသင့်တဲ့အကြောင်း ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ။
ကျုပ်လည်း Breakfast ကို တကူးတက ဂရုစိုက်စားလေ့ရှိပါတယ်
နေ့ခင်းစာနဲ့ ညနေစာကတော့ ပုံမှန် တစ်ပန်းကန်စာလောက်ပဲစားပါတယ်…
ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေမျှပေးကြတဲ့ ကိုခနဲ့ ဇီဇီ ခင်ဇော်တို့ကိုကျေးကျေးပါဗျ :s:
.ကျုပ်ကတော့ မနက်စာကို မနက်လင်းတာနဲ့ အ၀ အုပ်တော့တာပဲ…
.အဲဒါ ကျန်းမာရေး အသိရှိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး…။
.ကိုယ့်ဘ၀အခြေအနေအရ ဘယ်အချိန် ဘယ်လိုနေ့လည်စာစားရမယ်ဆိုတာ မသေချာလို့ …..
ဆြာမိုက်မှာ ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ထဲက Breakfast ကို တကူးတက ဂရုစိုက်စားလေ့ရှိတာ တစ်ခုအပါဖြစ်မယ်ဗျ။
ဦးပါရေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မနက်စာကို အ၀ အုပ်တာကောင်းတဲ့လက္ခာဏာပါဘဲဗျာ။
Breakfast ကို အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်မစားဖြစ်တာ ကြာပြီ ။ တခါတလေလည်း လုံးဝမစားဖြစ်ဘူး ။
မျက်လုံး နှစ်လုံး ပွင့်တာနဲ့ ထမိန်စွန်ထောင်ဆွဲပြီး ပြေးလွှားရင်း အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားရတာနဲ့ ….
Breakfast အဒိတ်ဘယ် ဖွင့်ပုံကို ခုမှ သိသဗျ ..
သန်းခရု .. ဥခင်ခ …
နံနက်စာ ပုံမမှန်ဘူးရယ် ….
စားဂျင်ဒဲ့အခါ စားပီး .. မစားဂျင်ဒဲ့အခါ မစားဒတ်ဘူး …
ပြင်အုံးမှဘာ … ဟီးးး
အမြဲတမ်း ပြေးလွှားနေရတာမို့ နံနက်စာဆိုတာ မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရ ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပေါ့
အချိန်ပေးပြီး စားဖို့ လုပ်ပါဦးမယ်ဗျာ
ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာ မနက်စာကို သေချာစားဖြစ်တယ် ..
ပိတ်ရက်ဆိုရင်တော့ အိပ်ယာထနောက်ကျတာများလို့ နေ့လည်စာအချိန်နဲ့ နီးသွားတတ်တဲ့အတွက် တစ်ခါထဲပေါင်းပြီး မနက် ၁၀ နာရီကျော်မှာ စားတယ်။
ကျနော်တော့..မနက်စောစော မှာ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်ပဲ… . သွင်းလို့ ဝင်တယ် ။
တခြားဘာမှ စားလို့ မ၀င်.. ။
အဲ..ဆယ်နာရီလောက်ဆို၇င်တော့… လာထား.. ဘာလာလာအကုန်စားတယ်.. ။
ဗိုက်ထဲက…တဂွီဂွီနဲ့ ကို..တောင်းနေတော့တာကိုး… ။
ကျနော် က တော့ ဒီ ပိုစ်ကို ဖတ်မိ တော့ အဖွား ကို ကျေး ဇူး တင် မိ တယ်။
တစ်ခုမ ဟုတ်တစ်ခု စားခိုင်းပါတယ်။
အဲဒီ တော့ အခု အသက်ကြီး တဲ့အထိ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ အလုပ် မသွား ခင်
တစ်ခု ခု စား ပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတယ် ဗျာ
မနက်စာစားတာဟာ ပိန်စေတယ်လို့လည်း.. ဆိုပါတယ်..။
I don’t think so. :-)))
Breakfast က ဒီ လို အဓိပ္ပါယ်မှန်း အခုမှသိတယ် ကိုခ။
ရုံးချိန်က ၈ နာရီ… ဖယ်ရီက ၇း၁၅။ အအိပ်ကမက်…(မအိပ်ရရင် ခေါင်းမူးတတ်လို့…)
၀ုန်းဒိုင်းကြဲပြေးလွှားရတဲ့ မလှမပ မနက်တွေတိုင်း…မနက်စာက အရေးအကြီးဆုံး မဖြစ်နေခဲ့ဘူး…။ လေးခရေးတဲ့ ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး…မနက်စောစော ထပြီး မနက်စာလေး စားသွားဖို့…ကြံစည်ပလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါဂျောင်း